Madaxweyne Farmaajo oo goordhaw gaaray magaalada Garoowe – Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa gaaray magaalada Garoowe ee xarunta Dowlad Goboleedka Puntland, halkaas oo ay si heer sare ah ugu soo dhaweeyeen shacab, madax iyo masuuliyiin ay kow ka yihiin Madaxweynaha Puntland Saciid Deni iyo Kuxigeenkiisa Axmed Karaash, kuwaas oo uu maanta u tagay Garoowe Caleema-saarkooda.
Madaxweynaha ayaa loo galbiyey gudaha magaalada, iyada oo la geeyey Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Puntland, halkaas oo ah goobta ay ka dhaceyso Munaasabadda Caleema-saarka Deni iyo Karaash. Isla goobtaas waxaa horay u sii joogay Madax iyo Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), oo aad isaga soo horjeeda siyaasad ahaan.
Marka laga reebo Dr. Cabdiqaasin Salaad Xasan, Madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray ee nool ayaa isugu tagay Garoowe, sida Shariif Sh. Axmed, Xasan Sh. Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo hadda ka degay halkaas.
Ammaanka ayaa aad loo sii dhuujiyey, waxaana Madaxweyne Farmaajo markii uu ka degay Garoonka Diyaarada Maxamed Abshir uu salaan ka qaatay ciidan goobta horay loogu sii diyaariyay, kadibna waxa uu salaamay shacabkii maantoo dhan u joogay halkaas soo dhaweyntiisa. Gelinka dambe ee maanta ayaa la filayaa iney bilaabato ka hadalka iyo ka qudbeynta Xafladda Caleema-saarka Madaxweynaha Puntland, Saciid Deni iyo Kuxigeenkiisa Axmed Karaash.
Lama oga iney madaxda meesha isugu tagtay oo dhan ay wada hadli doonaan, balse waxaa la filayaa iney munaasabadda ka qudbeeyaan dad uu kow ka yahay Madaxweyne Farmaajo, Madaxwenayaashii hore Xasan iyo Shariif-na ay ku xigaan, uuna soo saddexeeyo ninka la rumeysan yahay inuu yahay mucaaradka ay dowladdu ugu dhibsan og tahay, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sh. Axmed, oo ugu dambeyn gaaray Garoowe